Qalabka dugsiga – Bildung und Teilhabe
Sa farada dalxii syada iyo fasalka
Gaa diidka dugsiga
Taa geerada ba rashada
Cuntoo yinka maa lintii ee dugsiga xanaa nada iyo dugsiga
Ka qeybqaa dashada bulshada iyo dhaqanka
Sharaxaada saadaka dugsiga
Tan iyo 2011, Leistungen für Bildung und Teilhabe (faa’idooyinka waxbarashada iyo ka qeybqaadashada) waxaa loo tixgeliyay carruurta, dhalaanka dadka weyn oo yar intaa waxaa dheer shuruudahooda bil-laha joogtada ah.
Kani sidoo kale waxaa ku jira tabaruca shaqaalaha saadadka dugsiga.
Yaa helo faa’idadaan?
Ardayda dugsiga ee
Ka qeybgalo dugsiga guud ama shaqada,
Aanan helin wax lacag bixin tababarka ah,
Ka yartahay 25 sanno jir,
Heshay faa’idada sida waafaqsan Buugga II ee Sozialgesetzbuch (SGB II), Buugga XII ee Sozialgesetzbuch (SGB XII – Xeerka Caymiska Bulshada Jarmalka) ama Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Sharciga Faa’idada Magangalya Doonka), faa’idooyinka guriyeynta (Wohngeld) ama faa’idooyinka carruurta (Kinderzuschlag).
Waa maxay saadadka shaqaalaha dugsiga?
Ardayda u hesho faa’idadaan sida lacagta guud ee lagu iibsanayo sheeyada looga baahanyahay bilowga sannadka dugsiga. Intaa waxaa dheer boorsada dugsiga, tani sidoo kale wxaa ku jira waraaqaha, xisaabaha alaabaha wax lagu sawiro tusaale ahaan. Buuggaagta shaqada, qalimaanta, qalin geedka midabeysan, jooga qalabka, xirmada afar geesyada iyo tirtirayaasha.
Sidee ayaa faa’idada loo sameeyaa?
Faa’idooyinka waxaa la bixiyaa labo jeer sannadkii sida lacagta guud bilowga simistarka dugsiga.
Lacag bixinta waxaa lagu wareejiyaa akoonkaaga 1da Agoosto oo tirada EURO 70, iyo 1da Febraayo tirada EURO 30.
Sidee ayay u shaqeysaa?
Haddii aad heshid faaa’idooyinka guriga (Wohngeld) ama carruurta (Kinderzuschlag), kadib waxaad codsan kartaa Pro Arbeit oo lacag bixinta saadadka dugsiga. Si middaan loo sameeyo, si sahlan u qaad MACH MIT : : Hefte, Stifte & Co (Buuggaagta-qoraalka, qalimaanta iwm.) : : foomka “Komm – Mach mit” buuga-jeega, buuxi midaan, ku lifaaq ogeysiinta faa’idada gurigaaga (Wohngeld) ama carruurta (Kinderzuschlag) oo ku soo dir dhammaan Pro Arbeit. Maamulahaaga ayaa eegayo codsiga oo ku wareejinayo lacagta akoonkaaga haddii la ansixiyo.
Ardayda ee marhore helay faa’idooyinka sida waafaqsan SGB II, codsiga dheeraadka ah looma baahna. Qof walba oo helayo faa’idooyinka SGB II wuxuu si toos ah u helayaa faa’idadaan oo carruurtooda oo waxbarashada waqtiga buuxo qasabka ku ah waxbarashada haddii xaalada hore ee la sheegay la buuxiyo.
Ardayda ah 15 sanno jir iyo ka weyn, waa muhiim in shahaadada ka qeybgalka dugsiga loo geeyaa Pro Arbeit.
Tilmaamaha dhameystirka codsiyada KOMM – MACH MIT
Waxaad sheegan kartaa qarashaadka ka bilow bisha codsiga la gudbiyay. Codsiyada waxaa loo sameyn karaa carruurta, dhalinyarada iyo dadka yar ee weyn haddii ay ka hooseeyaan 25 sanno, booqo dugsiga iyo ha helin lacag bixinta tababarka. Codsiyada waxaa sidoo kale loo sameyn karaa carruurta haddii ay aadaan dugsiga xanaanada. Waxaad ka heli kartaa tilmaamo badan foomamka codsiga.
Tilmaamaha muhiimka ah ee xog illaalinta
Warbixintaada waxaa lagu qoray sida ay quseyso xeerarka sharciga (§§ 60 to 65 Buugga I ee Sozialgesetzbuch (SGB I - Xeerka Caymiskaq Bulshada Jarmalka) iyo § 67 a, b, c Buuga X ee Sozialgesetzbuch (SGB X)). Warbixintaada waxaa loo haynayaa si qarsoodi ah (maamulaha qarsoodiga bulshada).